Maalinta qorista iyo akhriska adduunka oo laga xusay Muqdisho – Radio Muqdisho
Maalinta qorista iyo akhriska adduunka oo laga xusay Muqdisho
Kulankaan maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho oo ay soo qaban qaabisay Wasaaradda waxbarashada Hidaha iyo Tacliinta sare ee Xukuumadda Soomaaliya ayaa ahaa mid lagu maamuusayay maalinta qorista iyo akhriska adduunka, waxaana ka qayb galay mas’uuliyiin ka tirsan Wasaaradda Waxbarashada aqoonyahanno, ardayda Jaamacadaha iyo dadweyne kale .
Kulanka ayaa kooxda fanka ee Iftin waxaa ay ku soo bandhigtay suugaan ka turjumeysa muhiimadda waxbarashada iyo sida ay bulshada muhiimka ugu tahay.
Prof Aadan Guuleed Shabeel iyo qabiir saxaafadeed Cabdi Xaaji goobdoon ayaa ka mid ahaa dadkii ka hadlay goobta oo ka faalooday ahmiyadda ay leedahay wax qorista iyo akhrinta.
“Aanu goosano sidii agaasimuhu u yiri qof walbow ku dadaal hal qof in aad wax barto, akhriska iyo qorista farta, Hotelada taga magaalada mara tabeelayaasha akhriya gobolkii banaadir aaway luuqaddii dhulkaa lagu daray anaga akadeemiyad goboleedka horumarinta afka Soomaaliga waxaanu rajeyneynay in gobolka Banaadir nagu gacan siin doono ilaalinta afka”
Agaasimaha Wasaaradda Waxbarashada Maxamed Cabdulqaadir Nuur oo hadal ka jeediyay kulankaas ayaa waxaa uu ku dheeraaday ka hadalka muhiimadda waxbarashada iyo dhibaatada waxbarasho la’aanta dalka ka jirta, waxaana uu ku baaqay in laga wada qayb qaato la dagaalanka Jahliga.
“Hadii anaga qaar naga mid ah ay aad u sareeyaan oo ay BHD wataan 100% , 90 na aysan waxba akhrin karin qorina karina, wax muhiimad ah manoo lahan, horumarna kuma gaari karno, marka si aan horumar u gaarno aan adduunyada ula tartano aan go’aankaas qaadano”ayuu yiri Agaasimaha.
Munaasabadaan oo ay ka hadleen aqoon yahano badan oo waqti dheer howlaha waxbarashada ku soo jiray ayaa gaba gabadii waxaa ka hadlay Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sare ee Xukuumadda Federaalka mudane Xaamud Cali Xasan, waxaana uu sheegay in Wasaaraddu ay dadaal dheer ku bixineyso tayeynta Waxbarashada iyo sidii waxbarasho loogu heli lahaa dhalaanka u baahan”.ayuu yiri Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda.
Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxaa ay dhawaanahaanba dadaal ugu jirtay sidii waxbarashada dalka loo tayeyn lahaa, iyadoo dalka ay aad ugu badan yihiin dadka aan fursadaha u helin waxbarashada ama duruufuhu u diideen, waxaana xusid mudan in dowladda dhexe markii ugu horeysay hirgelisay iskuulaad si lacag la’aan ah carruur badan ay wax uga baranayaan in kastoo ay u baahan tahay in dabagal lagu sameeyo sida ay u shaqeeyaan iskuulaadkaasi.
Maamul u sameynta Gobollada Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe oo laga taageeray Beladweyne “SAWIRRO”